घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू डेनिश फुटबल खेलाडीहरू Jannik Vestergaard बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य
जन्निक वेस्टरगाडको हाम्रो जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका बन्ने पत्नी, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्य बताउँछ।
संक्षेपमा हामी तपाईलाई वेस्टरगार्डको संक्षिप्त जैवको साथ उसको शुरुको क्षणदेखि नै प्रस्तुत गर्दछौं, जब उनी प्रख्यात भए। तपाइँको संस्मरणको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ तपाइँको जीवनको प्रगतिको चित्रण सार हो।
जेन्निक वेस्टरगार्डको जीवन कहानी।
हो, सबैलाई थाहा छ उनी इ England्ल्यान्डमा खेलेको सब भन्दा अग्लो सीबी हो। अझ, उहाँ द्वारा मूल्या been्कन गरिएको छ बीबीसी पाठकहरू २०२०/२०११ प्रिमियर लिग सत्रको शीर्ष १० खेलाडीहरू मध्ये एक हुन्। प्रशंसकको बाबजुद पनि, हामी जान्दछौं कि केवल केही प्रशंसकले उनको जीवन कहानी पढेका छन्। तपाईको सेवाको लागि अझ राम्रो सेवाका लागि हामीले उसको संस्मरण तयार गरेका छौं र सुरुमा कुनै विज्ञापन बिना नै सुरु गरौं।
जेन्निक वेस्टरगाड बचपन कहानी:
जीवनी स्टार्टर्स लागि, आफ्नो उपनाम "Veserguard" छ। जेन्निक वेस्टरगाड डेनमार्कको कोपेनहेगन सहरमा रहेको ह्विडोभ्रे शहरमा अगस्त १31992 २ को अगस्टको तेस्रो दिनमा उनकी आमा, वाइबके र बुबा जोनको जन्म भएको थियो।
बिग डेन आफ्ना मायालु आमाबाबुको बीच मिलनबाट जन्मेका तीन बच्चाहरूको एक मात्र छोरा हो। हेर, जेन्निकको जस्तो देखिने बुबा र सुन्दर आमा। तिनीहरू early० को शुरुवातमा देखिन्छन्।
Jannik Vestergaard बढ्दो दिन:
डेनिस खेलाडीसँग दुई बहिनीहरू (अन्ना र मेरी) हुन् जसलाई उनले आफ्नो प्रारम्भिक वर्षहरूसँग बिताए। केटाको रूपमा, उनले फुटबल मन पराउँथे (र अरू केहि पनि थिएन)। वास्तवमा, उसको परिवारका प्रत्येकले आफू जन्मेको क्षणदेखि नै विशेष भएको महसुस गर्न सक्दछन्। सानो Jannik र उनको मायालु आमा र बहिनीहरू हेर्नुहोस्।
ऊ दुई बहिना अन्ना र मेरीसँगै हुर्कियो।
के तपाईंलाई थाहा थियो? ... फुटबलको लागि जेन्निकको प्रेम पहिले उठ्यो प्रशंसा भन्दा प्रश्नहरु दुई कारणका लागि। सर्वप्रथम, उनका आमाबुबा (वाइबके र जोन) र दुई बहिनीहरू (अन्ना र मेरी) सबै संगीतमा थिए। दोस्रो, उसको उचाइ अत्यन्त लोकप्रिय डेनिस खेल - बास्केटबल र ह्यान्डबलको पक्षमा थियो।
Jannik Vestergaard परिवार पृष्ठभूमि:
संगीतमा उनको घरपरिवारको लाभदायक चासोको लागि धन्यवाद, यो परिवार मध्यम-वर्गको नागरिकको रूपमा बाँचिरहे र आरामसँग बसे। हामी अन्य स्मरणीय क्षण बीच मनोरञ्जन पार्क मा त बच्चा मजा को फोटो छ। तसर्थ, उहाँ एक गरीब बच्चा थिएन।
मनोरञ्जन पार्कमा उनकी बहिनी अन्नासँग वेस्टरगाडको बाल्यकालको फोटो।
साथै, भेस्टरगाडमा संगीत ब्यान्डवागनमा उफ्रिनु कुनै दबाब थिएन किनकि उनका अभिभावकहरूले उनलाई प्रशंसनीय फुटबलमा संलग्न भएको देखेका थिए। हामी नबिर्सौं, उहाँको हजुरबुबा र काका र काका उहाँका अगाडि फुटबलरहरू थिए।
Jannik Vestergaard परिवार मूल:
निस्सन्देह, डेनिश खेलाडीको नामले यो उच्चारण गर्दा तपाईंलाई जर्मन भाइब्स नदिन सक्छ। यद्यपि उनका केही पुर्खाहरूको जरा पश्चिम जर्मनीबाट छ - ठीक क्रिफेल्ड।
के तपाईंलाई थाहा छ? ... Jannik Vestergaard का एक आमा बुबा (उहाँको आमा) Wiebke) जर्मन हो जबकि उनका बुवा (जोन) शुद्ध डेनिश। हाम्रो अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाहरूमा उनी जर्मन जराहरू मातृसत्ताको माध्यमबाट हुन्छन्।
Jannik Vestergaard अनटोल्ड क्यारियर कहानी:
के तपाईंलाई थाहा छ कि डेनमार्क तारे चार मात्र थिए जब उनले स्थानीय क्लब भेस्टिया बीकेसँग प्रतिस्पर्धी फुटबलमा पहिलो कदम चाले? जब समय सहि भयो, जेन्निक त्यसपछि अर्को प्रख्यात पक्ष - Bk फ्रेममा सरे।
पक्कै पनि, उत्तम प्रशिक्षण लिनु केवल सबैभन्दा ठूलो डेनिश एकेडेमीसँग आउन सक्छ। त्यसोभए ठूलो चुनौती पाउनको लागि, जेन्निक भेस्टरगाडका अभिभावकहरूले आफ्ना छोरालाई एफसी कोपेनहेगनमा मुद्दा चलाउन दबाब दिए। धन्यबाद, उसले त्यहाँ प्रवेश प्राप्त गर्‍यो।
यहाँ ध्यान दिनु उपयुक्त छ कि फुटबलर फुटबलको शुरुको क्षणको बखत एक मिडफिल्डर र आक्रमणकर्ता हुन्थे। भेस्टरगाड अग्लो र अग्लो हुँदै जाने क्रममा उनीहरूले उनलाई अगाडि र मिडफील्डको भूमिकाबाट पछि हट्यो र डिफेन्डरको रूपमा अन्त्य नभएसम्म यहाँ सानो Jannik (पछि फिर्ता) उहाँ मुस्कुराएको रूपमा छ।
आफ्नो वृद्धि spurt उहाँलाई व्यावसायिक फुटबल मा आफ्नो प्रारम्भिक क्षण समयमा भूमिकाको परिवर्तन गरे।
कोपेनहेगनको साथ आफ्नो क्यारियरको चरम सीमामा, फुटबल उन्मादले यस्तो बृद्धि बढायो कि उसको शरीर खेलमा अनुकूल हुन सक्दैन। यसैले, १ 15 बर्षे उमेरले फुटबलमा रुचिहरू हराउन थाले - बेन्चमा बस्न बाध्य हुनु पर्दैन धन्यवाद।
जेन्निक वेस्टरगाड जीवनी - रोड टू फेम स्टोरी:
भाग्यवस, किशोरी फुटबल मा हार मानेन तर प्रतिस्पर्धी क्लब ब्रोंडी आफ्नै पहलमा सामेल भयो। यस समयमा, जेन्निक भेस्टरगाडका अभिभावक आफ्ना छोरालाई स्कूल छोड्ने कुरामा सहमति जनाइसकेका थिए ताकि उनी खेलमा बढी ध्यान दिन सक्दछन्। विडम्बनाको कुरा के हो भने, जब उनी आफ्नो पूर्व क्लब एफसी कोपेनहेगनको बिरूद्ध एउटा शहर डर्बीमा खेलिरहेका थिए कि १ 1899 होफेनहिमको स्काउटले उनलाई याद गर्यो।
जब स्काउटले केही हप्ता पछि लिंकनहिममा इनडोर खेलको दौरान जन्निकलाई अवलोकन गर्‍यो, उसले आफ्नो क्षमतामा विश्वासको पुष्टि गर्यो र उसलाई क्लबमा हस्ताक्षर गर्यो। पहिलो चोटि, जेन्निक भेस्टरगाडका परिवारका सदस्यहरू उनीहरूको प्यारोले अर्को देश छोडेर आएको देखेर स्तब्ध भए। तपाईं यो सबैको लागि राम्रो थियो।
फेरि, Hoffenheim मा रक्षक गरेको उत्तरार्द्ध समय छैन गुलाबी थियो। २२ मा, भेस्टरगाडले शंकाको साथ एक स्थिर प्रदर्शन गरेको थियो यदि उसले कहिल्यै आफ्नो फुटबल सपना पूरा गर्न पाउनेछ भने। जब सबै आशा हराए जस्तो लाग्यो, वेर्डर ब्रेमेन २०१ services मा आफ्नो सेवाहरूको खोजी गर्न आए।
सबै चीजले उसलाई हफनहाइममा कम प्लेटाइम सहित स्तब्ध पार्छ।
Jannik Vestergaard सफलता कहानी:
यो ब्रेमेनमा थियो कि ग्रेट डेनको फुटबलमा उनको उत्थानको सबैभन्दा राम्रो थियो कि उनले पछि स्वीकार गरे कि वर्डर ब्रेमेनको बलले उनलाई बचायो।
“म सँधै वेल्डरको लागि धेरै कृतज्ञ छु। जब इच्छुक क्लबहरू मेरो लागि कडासँग जोडिएका थिए तिनीहरूले मलाई विश्वास गरे। ”
फेरि, जब उहाँ बर्डरबाट बरुसिया मöचेlad्ग्लाद्बचमा सामेल हुनुभयो, तब उनले शीर्ष फार्मलाई जित्न थाले। कुनै समय मा, बिग Veserguard पहिले नै शीर्ष अंग्रेजी क्लबहरुबाट रूचिको आख्यानमा थियो। कागजमा राखिए जस्तै, जेन्निक वेस्टरगार्डले आफूलाई मिन्चेng्ग्लैडबाच डिफेन्सको लिन्चपिनको रूपमा स्थापित गरे।.
साउथ्याम्प्टनका लागि हस्ताक्षर गर्नु एउटा विशाल सपना साकार भयो ठूलो भेषर्गार्डका लागि।
जब उनी अन्ततः २०१ 2018 मा साउथेम्प्टनमा सामेल भए, उसले लिभरपूलको तुलना चित्रण गर्न सुरु गर्नुभन्दा धेरै समय लागेन। Virgil van Dijk हावामा आफ्नो कमान्डिंग उपस्थिति टाढा छैन कारणहरूको लागि। सत्य भन्नुको लागि, जेन्निक वेस्टरगाडको उचाई (१.1.99 मिटर वा .6.6..XNUMX फिट) अधिक कडा परिश्रमले उनलाई एकबाट धकेल्यो कुनै शou्का नायकको नजिक शून्य.
लाइफबगरले बाल्यावस्थाको कथा र जीवनी उत्पादन गर्दा छिटो अगाडि, उनले आफन्तको जस्तै अर्को डेनिस प्रतिभाको रूपमा आफूलाई सेन्ट्समा स्थापित गरे। पियरे - Emile Hojbjerg। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हुनेछ।
जेन्निक वेस्टरगार्ड वाइफ को हो?
त्यहाँ एक ब्ल्यान्डी छ जुन भेसेरगार्डको जीवनमा २०० before भन्दा अघि भएको थियो। ऊ युवावस्थादेखि नै डिफेन्डरसँग रही रही छ - ऊ ब्रन्डीमा हुनु भन्दा पहिले नै। यसैले, उनले बिग डेनको यात्रा र साउथ्याम्प्टनको साथ आफ्नो सफलता नभएसम्म मा सानो विजय मा साझा गरेको हुनुपर्छ।
यो जोडीको फोटो २०० in मा लिइएको थियो।
उनको नाम पर्नीली भेनिइक हो, र उनी भेस्टरगार्डकी स्वास्नी हुन्। मनपर्‍यो मार्टिन ब्रेथवेट, जेन्निकले निर्णय गरे कि उनी एक पटक पूर्ण रूपमा बसे पछि विवाह गर्नेछन् - पेशेवर।
प्रेमी र उसको तत्कालिन प्रेमिका २०१ 2018 मा आइजलमा तल हिंडे र सँगै भएका छन्, उनीहरूको खुशीको एक क्षण पछि छोराको साथ (सन् २०१ 2019 जन्मिएको) उनीहरूको आनन्दमा बाँड्न। वेस्टरगार्डकी श्रीमतीको फोटो हेरौं र उनीहरूको विवाहको अवसरमा उनका पतिसंगै खुशी हाँसदै।
जेन्निक वेस्टरगाड र उनकी श्रीमती पर्नीले भेन्निकेले २०१ 2018 मा विवाह गरेका थिए।
Jannik Vestergaard परिवार जीवन:
त्यहाँ एक समूह छ जो उहाँसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दैनन् ऊ फुटबल पिचमा के गर्छ। तिनीहरू केवल ऊ केवल मानिस हो र फुटबल खेलाडी होइन संसारले उसलाई देख्छन्। तिनीहरू Vestergaard परिवार हो!
Vestergaards परिवार हेर्नुहोस्।
यहाँ हामी तपाईलाई जेन्निक वेस्टरगाड अभिभावक र भाईबहिनीको बारेमा अझ बढी तथ्यहरू ल्याउँदछौं। यसका साथै हामी तिनका आफन्तहरूका बारे तथ्य पनि रूपरेखा राख्नेछौं।
Jannik Vestergaard पिता हैं:
जोन ग्रेट डेनको बुवाको नाम हो। उहाँ एक समय पेशेवर संगीतकार हुनुहुन्छ, विशेष गरी पियानोवादक जसले विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र पढेका थिए। सहयोगी बुवा डेनिस परिवारका हुन् र उनले रोयल डेनिस एकेडेमी अफ म्युजिकमा कोपेनहेगनमा आफ्नी पत्नी (वेस्टरगार्डकी आमा - विबके) लाई भेटे। त्यहाँ तिनीहरू दुबै प्रेममा परे जब उनीहरू पेशेवर संगीतकार बन्न अध्ययन गरिरहेका थिए।
Jannik Vestergaard आमा हैं:
Wiebke Veserguards आमा को नाम हो। उनको जन्म १ 1967 XNUMX मा क्रेफेल्ड, पश्चिम जर्मनीमा भएको थियो। Wiebke जर्मन परिवार जरा छ र एक सेलिस्ट को रूप मा संगीत उद्योग मा एक व्यापक क्यारियर छ। वास्तवमा, छ वर्षको उमेरमा, जन्निककी आमाले जर्मन स्थानीय संगीत स्कूलमा सेलो बजाउन शुरू गरे।
सुपर आमा, Wiebke १ 1986 1989-१-1991 from from देखि यूरोपियन युनियन युवा अर्केस्ट्रा का सदस्य थिए। अनुभवी संगीतकार १ XNUMX XNUMX १ देखि कोपेनहेगन फिलले काम गरिरहेका थिए।
उनलाई धन्यबाद, भेस्टरगाडसँग एक पटक जर्मन राष्ट्रिय टिमको लागि विकल्प थियो। यसको सट्टा, उसले डेनमार्कमा सम्मिलित हुने निर्णय गरे किनभने उनकी आमाले यो आफ्नो पेशाको भलाइको लागि स्वीकार गर्‍यो।
बारेमा Jannik Vestergaard भाइ बहिनी तथ्य:
ग्रेट डेनका दुई बहिना अन्ना र मेरी उनका ठूला फ्यान र केवल भाईबहिनीहरू हुन्। जे होस् दुई जोडी समान देखिन्छन्, तिनीहरू धेरै बर्ष पछि जन्मेका थिए तर धेरै निकट बन्धन साझा गर्छन्। जेन्निक र उसको दिदीबहिनीहरू बीचको उचाई भिन्नता जाँच गर्नुहोस्।
जेन्निक वेस्टरगाड बहिनीहरूलाई भेट्नुहोस्।
जेन्निक वेस्टरगाड सम्बन्धहरूका बारे:
डिफेन्डरको पुर्ख्यौलीको कुरा गर्ने हो भने विशेष गरी उसको बुवाआज्यू हजुरआमा हजुरआमालाई असह्य पानीको यात्रा गर्न मिल्नु हो। यद्यपि हामी विश्वस्त भई रिपोर्ट गर्न सक्छौं कि उनका मामा हजुरबुबा हन्नेस श्रायर्स वेस्ट ह्याम युनाइटेडको साथ विस्तृत इतिहासका पूर्व जर्मन पेशेवर फुटबलर हुन्।
यहाँ वेष्टरगार्ड हजुर वेस्ट ह्याम खेलाडीको रूपमा छ?
त्यस्तै वेस्टरगार्डका काका जान श्र्रेस र चचेरा भाई मीका श्रियर पनि क्रमशः बायर ० 05 युरेडिजेन र बोरुसिया मिन्चेng्गलाद्बचका लागि फुटबल खेलाडी थिए। यस बीचमा, डिफेन्डरको मातृ हजुरआमाको रेकर्ड छैन जबकि उनका काका, काकी, भतिजा र भतिजीहरू अझैसम्म चिनिन सकेनन्।
Jannik Vestergaard व्यक्तिगत जीवन:
साउथेम्प्टन लेजेन्डका शब्दहरूमा:
"मलाई फुटबल र यसका सबै चीज मनपर्दछ, तर यो मेरो जीवनमा नम्बर १ होइन।"
व्यापक रूपमा मैत्री विशालको रूपमा परिचित, भेस्टरगाड एक नरम-बोल्ने व्यक्ति हो। उहाँ एक राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई तपाईले कहिले पनि भेट्नुहुनेछ र अझै पनि आफ्नो आय वर्गमा नरहेका मानिसहरूले धेरै नम्र मान्नेछन्।
के तपाईं इन्स्टाग्राममा ठूलो हुनुहुन्छ? तपाईंको पोष्टमा मनपर्दो र कमेन्टहरू पाउन कुनै चिन्ता लिने छैन यदि तपाईंसँग वेस्टरगाड पछी हुनुहुन्छ भने। साथै, गुगल अनुवादले डिफेन्डरमा केहि पनि पाएन, जोसँग अंग्रेजी, उसको देशको भाषा र जर्मनको राम्रो कमान्ड छ।
ऊ उत्तम भद्र व्यक्ति होइन र?
तिनीहरू भन्छन् कि समय मान्छे परिवर्तन गर्दछ तर6फिट अग्लो प्लेयर आफ्नो मनमोहक प्रकृति को एक बिट परिवर्तन भएको छैन। ऊ अझै पनि डाउन टु अर्थ स्मार्ट चिप्पी हो जुन साथी साथीलाई सँधै साथीको रूपमा वर्णन गर्न लाज लाग्दैन।
गतिविधिहरू जसले उसको शौक र रुचिहरूको सूची बनाउँदछन् पढ्ने, अमेरिकी फुटबल, छुट्टी, चलचित्र हेर्ने र परिवार र साथीहरूसँग राम्रो समय बिताउने।
जीवनशैली र नेट मूल्य:
Veserguard को जीवन र उदयको बारेमा हाम्रा धेरै सामग्रीहरू पढिसकेपछि, यो विश्वास गर्न सजिलो हुनेछ कि 15.8० वर्षको उमेर भन्दा पहिले १.30..XNUMX मिलियन युरो बराबरको कम्तिमा जम्मा गर्ने उत्तम तरिका उसको मार्गहरू कुल्चन हो?
तपाईं डिफेंडरको रूपमा उस्तै वित्तीय सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ यदि फुटबल तपाईंको व्यापारको रेखा होइन। तर तपाईले salary 3,120,000,१२०,००० को वार्षिक तलब र currently ,60,000०,००० को साप्ताहिक ज्याला उसले हालै पाउनु पर्छ।
त्यहाँ धेरै आवश्यकताहरू छन् तपाईं यति विशाल आयसँग सन्तुष्ट पार्न सक्नुहुन्छ, आफैलाई विन्चेस्टर, इ England्ल्यान्डमा एक रमाइलो घर पाउने सहित। साथै, तपाई आफैंलाई सबै मौसम मोहित कार पाउँदा जस्तो लाग्दैन, जस्तो कि वेस्टरगाडले तलको कारसँग गर्‍यो।
हिउँमा कवच भएको फुटबल प्रतिभा कार हेर्नुहोस्।
जेन्निक वेस्टरगाडको बारेमा तथ्यहरू:
उसको बाल्यावस्थाको कहानी र बायोमा हाम्रो आकर्षक लेख लपेट्नको लागि, यहाँ उहाँको बारेमा थोरै-ज्ञात वा अनटोल्ट सत्यहरू छन्।
तथ्य # १ - साउदाम्पटोन ज्याला टूटने र कमाई प्रति सेकेन्ड:
प्रति वर्ष £ 3,120,000
प्रति महिना £ 260,000
प्रति हप्ता £ 59,908
प्रति दिन £ 8,558
प्रति घण्टा £ 357
प्रति मिनेट £ 5.95
प्रति सेकेन्ड £ 0.09
हामीले रणनीतिक हिसाबले जेन्निक भेस्टरगाडिको कमाईको विश्लेषणलाई घडीको टिकटमा राखेका छौं। तपाई यहाँ आउनु भएको छ भनेर तपाईले आफैंलाई जाँच गर्नुहोस्।
तपाईं Jannik Vestergaard गरेको हेर्दै सुरु देखि बायो, यो उसले कमाएको हो।
सत्य ठूलो Veserguard शीर्ष बीचमा छ, भन्नुभयो गर्न डेनिश फुटबल खेलाडीहरू जसले विदेशमा धेरै पैसा कमाउँछन्। के तपाईंलाई थाहा छ?… साउन D750० यूरो कमाउने औसत डेन साउथेम्प्टनमा जन्निकको साप्ताहिक ज्याला पूरा गर्न weeks० हप्ता (१. years वर्ष) को लागि काम गर्नु पर्छ।
वेस्टरगार्ड बुबाको नाम जोन हो जबकि उनकी दिदीहरूले अन्ना र मेरी नाम लिइन्। थप रूपमा, एक पटक रोम र पोप फ्रान्सिसका विशप संग भेट भएको छ। उहाँलाई अरू एक ईसाई ट्याग दिन हामीलाई के चाहिन्छ?
Points 77 अ a्कको सम्भावितताको साथ points 78 अ of्कको समग्र मूल्या rating्कन भेस्टरगाडमा राम्रो देखिदैन। चाहे धेरै प्रशंसकहरू यो विश्वास गर्न चाहन्छ कि रेटिंग उचित छ, हामीलाई थाहा छ तिनीहरू मध्ये एक भाग above 83 भन्दा माथि चिच्याउँदछ। सत्य यो हो कि, जन्निकको खेलले उनलाई समान तहमा राख्छ। कास्पर स्मीचेल (84)।
तथ्य # १ - घरपालुवा जनावर
Vestergaard जस्ता खेलाडीहरूले घरपालुवा जनावरहरू विशेष गरी कुकुरहरूको बाहिर एक सेलिब्रिटी बनाउँछन्। ब्र्याडी नामको गम्भीर देखिन्थ्यो। हामी सुझाव दिन्छौं कि उसले यसको नाम बडी राख्नुपर्दछ, जुन तिनीहरू लगभग अविभाज्य छन्।
आफ्नो कुकुर ब्रैडीको साथ वेस्टरगाड उडानको एक दुर्लभ तस्बिर।
तथ्य # १: साउथ्याम्प्टन दिवसहरूको सबैभन्दा दुखद क्षण:
सम्झनुहोस् साउथेम्प्टन (०) - ()) २ October अक्टोबर २०१0को लेसिस्टर खेल? यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं सायद सबैभन्दा नराम्रो दिन र डिफेंडरको सम्पूर्ण पेशेवर क्यारियरको सबैभन्दा ठूलो नोक्सान जान्नुहुन्छ।
तथ्य # १: आफ्नो साउदाम्पटोन Debut रक्त मा समाप्त:
निस्सन्देह, मानिसहरू भन्छन् प्रिमियर लिगमा स्वागत छ! - एक कारणको लागि। जन्निकको इपीएल डेब्यूले उनका आमा बुबा र परिवारका सदस्यहरूले सास फेर्दै गरेको देखे। यदि तपाइँ बिर्सनुभयो भने, साउथेम्प्टन नयाँ केटा गार्ड बन्द पक्राउ थियो र एक रगत नाक पीडित इ England्ल्यान्डमा काममा पहिलो दिनमा।
को विशाल Dane बारेमा यो सूचनात्मक टुक्रा पढेर लागि धन्यवाद। जेन्निक वेस्टरगाडको जीवनीले हामीलाई विश्वास गर्न उत्प्रेरित गर्छ कि सफलताको बाटो सँधै सहज छैन, तर अन्त्यमा, यसले हामीलाई कडा मेहनत गरेको खण्डमा सधैं लाभदायक अन्तको आश्वासन दिन्छ। कुनै श doubts्का छैन, जेन्निक वेस्टरगाड साउथेम्प्टन एफसी प्रति वफादार छ र उनी पहिले नै एक संत कथा भनिन्छ।
अब हामीलाई जेन्निक वेस्टरगाडका अभिभावकहरूले उनको शब्द र कार्यहरूमा उनको क्यारियरमा समर्थन गरेकोमा उनीहरूको प्रशंसाको लागि प्रशंसा गर्दछौं। उसले आफ्नो परिवारलाई स्कूल छोड्ने आफ्नो मनसाय बताउदा पनि तिनीहरू चुप लागेर उभिए।
"आफ्नो सपनाको पछि लाग्नुहोस्, आफ्नो जोशको अनुसरण गर्नुहोस् र यदि तपाईं सपनाको रूपमा परिवर्तन भएन भने तपाईं जहिले पनि फर्केर आउन सक्नुहुन्छ। तिमी फेरि स्कूल जान सक्छौ। ”
Lifebogger मा, हामी सटीकता र निष्पक्षता संग बचपन कथाहरू र जीवनी तथ्या deliver्क वितरित मा गर्व गर्दछौं। यदि तपाईं केहि पनि देख्नुहुन्छ जुन ठीक लाग्दैन भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा तल सन्देश छोड्नुहोस्। Jannik Vestergaard को बायो को द्रुत पकड प्राप्त गर्न, यहाँ उहाँको विकी तालिका सारांश छ।
पुरा नाम: जेन्निक वेस्टरगाड।
जन्म मिति: अगस्त १31992 २ को तेस्रो दिन।
जन्मस्थान: डेनमार्क मा Hvidovre को शहर।
अभिभावक: Wiebke (आमा) र जन (बुबा)।
Siblings: अन्ना र मेरी।
पत्नी: Pernille भेन्नाइक।
बच्चाहरु: नोभेम्बर २०२० सम्मको छोरो
रुचि: अमेरिकी फुटबल, vacationing चलचित्र हेर्दै र परिवार र साथीहरूसँग राम्रो समय खर्च।
वेतन: £ 3,120,000।
नेट मूल्य: १.15.8..2020 मिलियन यूरो (२०२० तथ्या )्क)
फिट मा उचाई: Feet फिट, ११ इन्च।
मीटरमा उचाई: 1.99 एम।
परिमार्जित मिति: अक्टोबर,, २०१ 15
गरिहहहिल बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
मार्कस रिशफोर्ड बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य